Hanbo ™ meriri nturu ugo nzere nzere mba ụwa nke afọ 2019!
E hiwere nturu ugo ụlọ IFD na 2013, nke a maara dị ka onyinye “Olympic” nke ụlọ ọrụ elu ụlọ zuru ụwa ọnụ. Tupu nke ahụ, a na -eme ọgbakọ IFD na asọmpi ntorobịa elu ụwa otu ugboro n'afọ, na -abụkarị na mba dị iche iche n'ụwa niile n'oge mgbụsị akwụkwọ. Kemgbe 2013, IFD emeela mgbanwe, na -enwe ogbako IFD na onyinye ụlọ elu mba ụwa n'afọ ndị na -adịghị mma, yana ogbako IFD na asọmpi ntorobịa ime ụlọ ụwa n'ime afọ.
Onyinye Injinịa na 2019 bụ nturu ugo ụlọ nke anọ nke mba ụwa. N'ime asọmpi nturu ugo mba ụwa nke IFD, ọrụ owuwu ụlọ 86 sitere na mba iri, gụnyere United States, United Kingdom, Germany, Austria, China, Europe, America na Asia, sonyere n'asọmpi maka nnukwu onyinye anọ: elu ụlọ dị larịị. , ụlọ gbadara agbada, ụlọ igwe na ndozi mgbidi dị na mpụga. Mgbe ndị ọkachamara IFD nyochachara nke ọma, ihe nrịba ama nke "Hubei Jingmen pengdun winery" nke Beijing Hanbo Technology Development Co., Ltd., China meriri wee nweta ihe nrịba ama ụlọ. Nke a bụkwa oge mbụ China meriri IFD International roofing award.
Hanbo ™ lekwasịrị anya n'iwu nchekwa ọkụ na nchekwa gburugburu. N'ime afọ 17, ọ tinyela aka na nyocha na mmepe, ihe ọhụrụ na echiche, imewe pụrụ iche na njikwa ụlọ dị mma, wee nweta ọtụtụ asambodo patent n'oge oge ahụ. Companylọ ọrụ ahụ etolitela n'ime ahịa, R&D na onye na -eweta ndị na -eweta ọrụ dị iche iche. Usoro mmepụta usoro nke ọ bụla nwere ike tinye echiche nke nkwekọrịta n'etiti mmadụ na okike, mee ka ụlọ ahụ guzosie ike na okike, chekwaa ike ma chebe gburugburu ebe obibi, mee ka okike banye n'ime ndụ, ma melite ndụ ahụike, ntụsara ahụ na nchekwa, ịrụ ọrụ na oghere ndụ mmadụ. ihe.